काँडा बिजेकाे छ ? यस्ता छन् निकाल्ने घरेलु उपाय | नेपालन्युज
काँडा बिजेकाे छ ? यस्ता छन् निकाल्ने घरेलु उपाय
कहिले काहीँ काम गर्दा हाम्रो हातमा वा खुट्टामा काँडा बिज्न सक्छ । काँडा सानाे बिजे पनि धेरै पिडा हुने गर्दछ । कुनै बेला त्यस ठाउँमा संक्रमणको जोखिम पनि हुन सक्छ । त्यसैले सकेसम्म चाँडो हटाउनुपर्छ । यस्ता छन् काँडा हटाउने घरेलु उपायहरु
थोरै पानीमा एक चम्चा बेकिंग सोडा लगाउने र काँडा बिगेको ठाउँमा लिप लगाएर पट्टीले बाध्ने र दुइ घण्टा त्यसै छाडिदिने । पट्टी हटाए पछि काँडा थोरै बहिर निस्कीएको देख्न सकिन्छ । त्यसलाई ट्वीजरको सहायताले विस्तारै बाहिर निकाल्ने ।
काँडा बिजेकाे ठाउँलाइ सिधे नुन पानीमा डुबाउने वा सिधे नुनकाे पट्टी बाध्ने यसो गर्दा पनि काँडा बहिर निस्किन्छ । यदी एक पटक पट्टी बाध्दा पनि निस्कीएन भने जबसम्म काँडा निस्कीदैन तब सम्म बाधेर राख्ने ।काँडा विस्तारै बाहिर निस्किन्छ ।
काँडा बिजेको ठाउँमा केरोको बोक्राले रगड्नुहोस् र बोक्रालाई रात भर काँडा भएको ठाउँमा बाधेर राख्नुहोस् । यसो गर्दा काँडा बाहिर निसि्कन्छ ।